Yakadzora Girazi Mudziviriri weApple Watch | Ndinobva mac
Yakapusa girazi mudziviriri weApple Watch
Chimwe chezvinhu vatengi vefoni mbozha vanoita chaipo kunze kwebhokisi kuisa chengetedzo yechidzitiro. Kune akawanda marudzi evanodzivirira screen pamusika, asi iwo ndiwo akadzikama magirazi anopa iyo kifaa chitarisiko chakanakisa.
Chokwadi iwe waona akawanda ekuchengetedza macomputer eiyo iPhone kana iPad, asi pakatanga kuiswa Apple Watch, mune yangu chinhu choga chandakawana vaive vadziviriri veplastiki avo nekufamba kwemazuva vakatanga kubvisa Y yakaramba yakaunyana mumakona akaisvonaka emakona egirazi eApple.
Kana iwe uchida kuchengetedza girazi pachiratidziro cheApple Watch yako, unotova nesarudzo dziri nani pamusika. Nhasi ndinoda kukuratidza mbiri yauinayo paiyi link kana mune imwe iyi uye kuti zvakagadzirwa negirazi rakadzikama. Zvakajeka kuti kana uchiisa mhando iyi yemudziviriri, wachi inowedzera hukobvu hwayo zvishoma, asi hapana kana munhu akambotaura kuti kushandisa chinovhara mudziviriri kwaisave nekukanganisa kwerudzi urwu.
Une mikana miviri, imwe inovhara skrini rese uye imwe inoiswa chete pachikamu chakatwasuka cheiyo skrini, ichisiya makona akapoteredzwa asina kufukurwa. Uku ndiko kunetsekana kukuru kweavo vane michina ine masikirini akakombama kumucheto uye ndiko kuti kana tikaisa mudziviriri asingavhare skrini rese, zvinoita sekunge iri "glob" risingakwani zvakanaka.
Sezvauri kuona mumifananidzo yatinobatanidza, mumusika unogona kuwana girazi rakadzikama reiyo Apple Watch yakakombama kana yakatwasuka. Kune yakasarudzika-kune-iyo-pfumo sarudzo, iyo girazi inowedzera kupenya kwemavara kune iyo inopinza chikamu cheiyo skrini. Kana ndikakuudza chokwadi, nekuda kwekunakirwa, mavara. Iwe une chidzitiro chekudzivirira pane yako Apple Watch?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakapusa girazi mudziviriri weApple Watch
Samsung yaitora nguva, ivo vari kutogadzirira yakaenzana neiyo HomePod
Dhiraivhu dzakaomarara uye maMac anozodhura nekuda kwekoniyoni nyowani yedigital